Antoine Griezmann Mise Neymar? Rivaldo Oo Barcelona U Tilmaamay Xiddiga Ay Tahay In Ay U Dhaqaaqaan Xagaagan, Sababtana Wuu Sharaxay. – Wararka Ciyaaraha Maanta
Antoine Griezmann Mise Neymar? Rivaldo Oo Barcelona U Tilmaamay Xiddiga Ay Tahay In Ay U Dhaqaaqaan Xagaagan, Sababtana Wuu Sharaxay.
Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo horayna ugu soo ciyaaray kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa Barcelona u sheegay xiddiga ay tahay in ay u dhaqaaqdo Neymar Ama Antoine Griezmann kuwaas oo si weyn loola xiriirinayay kooxda Barcelona xagaagan.
Rivaldo ayaa Kooxda Barcelona u sheegay in ay u dhaqaaqaan saxiixa Neymar iskana daayaan saxiixa Antoine Griezmann sabab la xidhiidha in uu xiddiga reer Brazil horay uga soo garab ciyaaray Lionel Messi.
Neymar ayaa isaga tagay kooxda Barcelona xagaagii 2017 isaga oo ku biiray kooxda PSG Laakiin 27 jirka reer Brazil ayaa si weyn loola xiriirinayaa ku soo laabashada Barcelona.
Xiddiga ayaa guulo badan la soo gaadhay Barcelona isaga oo kula soo guulaystay champions league iyo waliba laba horyaal oo La Liga ah.
Neymar ayaa ka mid ahaa saddexley daafacyada adduunka khal-khal galisay isaga oo ka garab ciyaaray xiddigaha Lionel Messi iyo Luis Suarez.
Griezmann ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa kooxda Barcelona kadib markii uu xaqiijiyay in uu isaga tagi doono kooxda Atletico Madrid inta lagu jiro xagaagan.
Laakiin Rivaldo ayaa aaminsan in xiriirkii uu Neymar la lahaa xiddigaha Lionel Messi iyo Luis Suarez la macno tahay in uu si fiican ugu soo bixi doono shaxda Barcelona marka loo eego Griezmann.
“Hadii aan kala dooran lahaa labada xiddig si ay Barcelona ula soo saxiixato xagaagan waxa aan dooranayaa Neymar”ayuu Rivaldo yidhi.
“Taageerayaashu Haatanba way garanayaan waxa uu awoodo, waxa uu qiimihiisa u muujiyay kooxda markii ugu dambaysay ee uu joogay kooxda isaga oo lamaane halis ah la sameeyay xiddigaha Messi iyo Suarez”.
“Sidoo kale waa dookh fiican oo hogaamin kara weerarka Barcelona kadib Lionel Mess”.
“Griezmann waa xiddig cajiib ah laakiin la soo saxiixashadiisa ayaa noqon doonta mid khatar ah maadama uuna waligiis Barcelona kaga garab ciyaarin Suarez iyo Messi”.
“Dabcan hadii uu u ciyaaro sida uu haatan ugu ciyaaro Atletico Madrid waxa uu noqon doonaa muhiimad ku soo biirtay kooxda”.
“Laakiin waxa aan ka doorbidayaa Neymar sababta aan soo tilmaamay darteed, wuu garanayaa kooxda waxana uu si joogto ah ula socdaan xiddigaha Messi iyo Suarez”.